पाँडेकै साथी खुपिका बाउ गाउँबाट उपचार गर्न भन्दै काठमाडौँ आउँछन् । उनका भतिजले त्यही औषधि किनेर खुवाउँछन् । निको पनि हुन्छ । तर जाँच गराउँदैनन् र त्यो औषधि कहाँबाट आयो पनि खुपिकाबाउलाई थाहा हुँदैन ।
स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी संशोधित निर्देशिका, २०७३ ले आयुर्वेद चिकित्सकले केके स्रोत साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ ? केके उपचारका विधि हुन्छन् भनेर स्पष्टरुपमा तोकिदिएको छ । तर त्यो मापदण्डको प्रयोग भएको पाइदैन । त्यसको कारण पनि छ, खास कुरो के भने एउटाको नाममा फर्म दर्ता गर्ने, चिनेजानेकै आयुर्वेद डाक्टरहरुको नाम टाँस्ने र कहीँ कतै आयुर्वेद डाक्टरहरु पनि देखिने, निश्चित पैसाको बार्गेनिङ गर्ने र त्यस्तो अवैद्य अड्डाहरुलाई चल्न दिने परिपाटी धेरै ठाउँमा छ । हिजोका दिनमा झोलामा आयुर्वेद औषधि बोकेर बाटोमा बेच्दै हिड्नेहरु अहिलेका नाम कहलिएका उद्योगी भइसकेका छन् । उनको मन आर्थिक रुपमा यति साँघुरो छ कि पैसा बाहेक आयुर्वेदको गुणस्तरीयताको केही परबाह नै हुँदैन । मात्रै हुन्छ छुपारुस्तम विधि र तौरतरिका । त्यसो त अहिले पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दशौँ तहमा कार्यरत आयुर्वेद डाक्टर बाबुराजा अमात्य, आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रामअधार यादव, सिंहदरबार वैद्यखानाका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डा. वंशदीप खरेल र अन्य विशिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सकहरु धुमधडाकाले छुपारुस्तम व्यक्तित्वहरु हुन् । जसको नाम र आडमा त्यस्ता आयुर्वेद पाँडेहरुले डम्फु बजाइरहेका हुन्छन् । जहाँसम्म आयुर्वेद औषधि निर्माण गर्नेहरुको सवाल छ, धेरैले औषधि निर्माण गर्ने ठाउँ नै देखाउँदैनन् । सुन्नमा आएको के छ भने केही समयअघि डिडिएका उद्योग शाखामा कार्यरत डाक्टर प्रकाश ज्ञवालीले मापदण्ड नपुगेका ७ वटा उद्योगलाई बन्द गराएका थिए, तर पछि सोही शाखामा कार्यरत अन्यले प्रतिव्यक्ति रु. ७ लाख लिएर उद्योग दर्ता गरिदिए भन्ने पनि सुनिएको छ । यो कुरा थप समाचारका लागि आवश्यक खुराक पनि हुन सक्छ यदि कोही अनुसन्धानमूलक रिपोटिङ गर्न चाहन्छ भने ।
आयुर्वेद चिकित्सकीय पद्धतिमा मात्रै होइन, यसको निर्माण र प्रचार एवं बजारीकरणमा समेत समस्या छ । कहिलेकहीँ डिडिएले प्रदेश वा संघीय सरकारका संरचनाहरुमा औषधिको समानुपातिक वितरण भन्दै अनुज्ञापत्र आव्हान गर्छ, तर त्यहाँ यति ठूलो सिण्डिकेट छ कि मानाँै त्यसमा केही व्यापारी र उद्योगीहरुले ठाडै बाजी मारिहाल्छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरुमा नेपाल आयुर्वेद व्यवसायी संघका अध्यक्ष जंगराज गिरीको नाम पहिलो पंक्तिमा आउँछ । भनिन्छ, हिजोको दिनमा उनी काठमाडौँका गल्लीहरुमा गलैचाको खुला ब्यापार गर्दथे, तर आज सिण्डिकेटबाटै उनी मालामाल भए । विष्णु सिम्खडा, किरण शर्मा आदि अरु नाम कहलिएका पाँडेहरु हुन्, जसको न उद्योग छ तर बजारमा एकैरात हजाराँै प्याकेट च्यवनप्राश र अरु आयुर्वेद औषधि निर्माण गरेर रातारात एक नम्बरको आयुर्वेद औषधि वितरक वा स्कटिष्ट बन्ने ल्याकत राख्दछन् । यो कुरा त नेपालमा दर्ता भएका सयभन्दा बढी आयुर्वेद उद्योगहरुका मालिकका गुनासो हो, जो मुखले बोल्दैनन् र अरुले बजारमा यस्ता कुराहरु ल्याइदिऊन् भन्ने चाहन्छन् । अष्टांग आयुर्वेद अस्पतालका सञ्चालक हृदयनारायण चौधरी त्यस्तै अर्को नाम होे, जो बजारमा खुलेआम पेन निल ओइल बेच्छन्, उनी न त आफ्नो उद्योग देखाउँछन्, न त त्यसमा कुन चाहिँ त्यस्तो महंगो इन्गे्रडिएन्ट मिसाइएको छ भनेर कोही कसैलाई भन्न सक्छन् । यो त केबल डिडिएका कर्मचारी र चौधरीकै मिलेमतोमा धन्दा अबिरल रुपमा अगाडि बढिरहन्छ, इन्द्रावती बगेजस्तो गरि । आयुर्वेदमा नीति र नियम एकातिर छ, कामकुरो र धन्धा अर्कोतिर भइरहन्छन् । आयुर्वेदको स्तरोन्नतिका लागि कोही कसैलाई मतलब छैन, मतलब छ मात्रै पैसाको ।
विरामीको जाँच गरेवापत् र औषधि सेवा दिए वापत आयुर्वेद क्लिनिकले सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । त्यो सेवा शुल्क निर्देशिकामा व्यवस्था भएको ‘सेवा शुल्क निर्धारण समिति’ ले तोके बमोजिम हुन्छ । तर यहाँ आफूखुसी जाँच वापतको सेवा शुल्क लिने र औषधिको मूल्य पनि आफूखुसी राख्ने चलन छ । जसले गर्दा विरामीहरु डामिएका छन् । कस्तोसम्म छ भने नक्कली सर्टिफिकेटको भरमा तथाकथित डाक्टरहरु विरामी जाँच्छन् । यो परिपाटी आयुर्वेदमा भन्दा बढी वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रमा छ । योग तथा प्राकृतिक एवं अन्य पूरक चिकित्सामा हेर्ने हो भने यस्तो दयनीय अवस्था छ कि भनेर साध्य छैन । औषधि नै नचलाउने विधा भनिन्छ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सालाई तर त्यसमा लुकीछिपी यति धेरै औषधिको प्रयोग हुन्छ कि भनेर साध्यै छैन । युनानी, होमियोप्याथी, अकुपञ्चर, फिजियोथेरापीमा यति धेरै विकृति र विसंगति छ कि मानौँ तिनले विरामीलाई निको पार्ने भन्दा पनि रोग ब्युताएर मुत्युको मुखमा लैजान्छन्् कि भन्ने जस्तो पो लाग्छ ।
प्रकाशित लेख नितान्त लेखकको विचार हो ।